Wararka Dalka Archives - Daafeet.com
Home » Wararka Dalka
Hay’adda Socdaalka ee Qaramada Midoobay ee IOM oo kaashaneysa Hay’adaha cunnada ayaa sahay caafimaad oo gaareysa Sideed Tan waxa ay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay sheegtay Hay’adda gargaarkan bixisay in loogu tala galay dadka ku nool Somaliland, Puntland, Jubbada Hoose, Gedo iyo gobolka Banaadir. Sahayda ayaa isla markiiba loo diri doonaa xarumaha IOM ee rugta caafimaad iyo kuwa guurguura, ...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Muxumed Xuseen Axmed u magacaabay Madaxa Unugga Isku Xirka Deeqaha, kaas oo ka shaqeyn doona arrimaha la xiriira Deeqaha. Maxumed Xuseen Axmed ayaa ah NGO-le weyn oo in ka badan 10 sano ka soo shaqeeyay Arrimaha Gar-gaarka, isagoo la soo shaqeeyay inta badan Hay’adaha ka shaqeeya Arrimaha Bani’aadanimada. Unugan Isku Xirka ...
Taliyihii dhawaan loo magacaabay Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa maanta xilka la wareegay, kaddib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta NISA. C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo sii hayay xiika ku simaha taliyaha hay’adda Nabad-sugida muddo ku dhaw Afar bilood ayaa ku wareejiyay xilka taliyaha cusub. Munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiirka Amniga gudaha ...
Golaha Qurbo joogta Koonfur Galbeed oo Soo dhaweyey Magacaabista Taliyaha cusub ee nabadsugida Generaal Xuseen Cusmaan Xuseen.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa Xukun dil Toogasha ah ku xukuntay G/sare CabdiNaasir Xoosh oo ka tirsanaa ciidamada Badda Soomaaliya. Waxaa lagu eedeeyay in uu dil bareer ah u geystay Taliye ku xigeenkii hore ee Ciidamada Badda Sareeyo Guutto Siciid Aadan Yuusuf Mariino. Maxkamadd ayaa horay u dhageysatay kiiska waxaana ugu dambeyntii ay maanta ku xukuntay dil toogasho ah. Gudoomiyaha ...
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow magacaabay Taliyeyaasha Booliska, Nabad Sugidda iyo Asluubta Soomaaliya, kadib kulan deg deg ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga iyo Wasiirka Cadaaladda ayaa Shirka gaarka ah ee Golaha Wasiirada Soomaaliya waxa ay ka soo jeediyeen magacaabistaan xubnahan, iyadoo Golaha Wasiirada ay isku raaceen. Shirka Golaha Wasiirada Soomaaliya, kadib waxaa warbaahinta la ...
Guddiga Joogtada ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan aan caadi aheyn ka yeelanaya khilaafka ka dhex taagay ganacsatada iyo Wasaaradda Maaliyadda ee ka dhashay canshuur kordhinta lagu soo rogay. Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga iyo Warshadaha golaha Shacabka Maxamuud C/raxmaan Beene beene ayaa sheegay in maanta Guddigooda ay la kulmayaan Ganacsatada, isla markaana wixii ay kala kulmaan ay berri horgeyn doonaan Guddiga ...
Aqoonyahan Sheekh Nuur Abuukar Qaasin oo ka mid ah waxgaradka somaliyeed ayaa waxaanka wareysaney heshiis uu dhawaan shariif Xasan kula soo galey dalka jabuuti hay’ado ajaaniib ah oo raba iney ceelalka gaas dabiiga ka qodaan degmada afgooye. Sheekh nuur Abukar Halkan hoose kaga dhegeyso mobilkada Sheekh-nuur-Abuka r Mobil
Wasiirka Gaadiidka, cirka iyo dhulka ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa soo saaray sharci cusub oo ku saabsan sumadda Gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Wasiirka ayaa sheegay in sharcigan uu yahay mid cusub iyo mid laga soo qaatay xeerarkii hore oo la is waafajin doono. Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inay sameeyeen taargooyin cusub oo ganacsi ah, kuwasoo ...
Shir jaraa’id oo ay maanta magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuqa bakaaraha ay ku qabteen qaar ka mid ah Ganacsatada gobalka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in ay joojiyeen Guud ahaan Ganacsigii suuqa Bakaaraha kadib cabashooyin ay sheegeen in wax laga qaban waayay. Ganacstada ayaa sheegay in ay xamili wayeen lacago dheeraad ah oo ay ku soo kordhisay Dowladda Soomaaliya iyagoo ...